China Polyethylene Glyeol 300 PEG 300 mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
Izicelo eziphambili:Le mveliso ayinayo ityhefu, ayicaphukisi kwaye inokunyibilika kwamanzi, ukuhambelana, ukuthambisa, ukunamathela kunye nokuzinza kobushushu. Ke, uthotho lwe-PEG-300 lufanelekile ukulungiselela iipilisi njengethambile. Inokubambisana ngokubanzi kunye neentlobo ze-solvents, ngoko ke isisombululo esihle kunye ne-solubilizer kwaye isetyenziswe ngokubanzi kumalungiselelo olwelo, njengesisombululo somlomo, i-eye drops, njl.
Ukugcinwa kunye nokuthuthwa: Le mveliso ayinabungozi, idangatye lilinda, njengokuthunyelwa ngokubanzi kweekhemikhali, zitywinwe kwaye zigcinwe kwindawo eyomileyo.
I-polyethylene glycol yonyango yaziwa ngokuba yi-polyethylene oxide (PEO). Umgca we-polyether wafunyanwa ngokuvula i-polymerization yeringi ye-ethylene oxide. Ezona zicelo ziphambili kwicandelo le-biomedical zezi zilandelayo:
1. Qhagamshelana lens isisombululo. I-viscosity yesisombululo se-polyethylene glycol esine-ethe-ethe iyavelela kumgangatho wokucheba kwaye iibacteria azikho lula ukukhula kwi-polyethylene glycol.
2. Isithambisi sokwenziwa. I-ethylene oxide kunye nepolymer yokunciphisa amanzi. Ukulungiselela i-matrix yamafutha amachiza anyibilikayo emanzini, inokusetyenziswa njenge-solvent ye-acetylsalicylic acid, icaffeine, nimodipine kunye nezinye iziyobisi ezingenakunyibilika ukulungiselela inaliti.
3. Ukuhanjiswa kweziyobisi kunye ne-enzyme carrier. Xa i-polyethylene glycol isisombululo samanzi sigqityiwe kumaleko angaphandle wepilisi, ukusasazeka kwesiyobisi kwipilisi kunokulawulwa ukuphucula ukusebenza.
4. Ukuguqulwa komphezulu wezinto zepolymer zonyango. Ukungqinelana kokuhambelana kwezinto zePolymer xa kudibene negazi kungaphuculwa ngokubekwa kwintengiso, ukugcinwa kunye nokudityaniswa kwe-amphiphilic copolymer equkethe i-polyethylene glycol kumphezulu wezinto zonyango lwepolymer.
5. Yenza ifilimu yokucwangcisa ye-alkanol.
7. I-Polyethylene glycol 4000 yi-osmotic laxative, enokonyusa uxinzelelo lwe-osmotic, ifunxe amanzi, ithambise isitulo, yonyuse umthamo, kwaye ikhuthaze i-peristalsis yamathumbu kunye nokuzithuma.
8. Ukulungisa amazinyo emboleko. I-Polyethylene glycol yayisetyenziswa njengeyona nto yokulungisa amazinyo ngenxa yeendawo zayo ezingeyityhefu kunye nejeli.
9. I-PEG 4000 kunye ne-PEG 6000 zihlala zisetyenziselwa ukukhuthaza ukudityaniswa kweseli okanye iprotoplast fusion kunye noncedo lwezinto eziphilayo (umz. Igwele) ukufunxa iDNA ngexesha lotshintsho. Isikhonkwane sinokufunxa amanzi kwisisombululo, ke sisetyenziselwa ukugxila kwisisombululo.
10. Kuvavanyo lokufunda iimolekyuli zeproteni, sinokulinganisa indawo ezixineneyo kwi vivo ukuqinisekisa ifuthe lendawo yokuxinana kulwakhiwo lweprotini.
Ukucaciswa Inkangeleko （25 ℃） Umbala wolwaziPt-Co IHydroxylvaluemgKOH / g Ubunzima beMolekyuli Indawo yokumisela ℃ Umxholo wamanzi （%） Ixabiso le-PH1% Isisombululo samanzi）
I-PEG-300 Ulwelo olungenambala olukhanyayo Iifayile ezingama-20 340 ~ 416 Ngama-270 ~ 330 - -0.5 5.0 ～ 7.0
Egqithileyo ICarbopol 940
Okulandelayo: ICarbopol 20